ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အချစ်ဆိုသော ဧည့်သည်
image from yenta4.com
အချစ် ဆိုတာကိုယ့်အတွက်တော့ အမေ့ခံနှလုံးသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖော့ဖယောင်းအိမ်ကလေးတစ်လုံးပါ ။ အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာ မသေချာခြင်းတွေရှိတယ် ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက် ဘယ်တော့မှ မဆုံမယ့် လမ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းနဲ့ အတ္တမာနတွေရှိတယ် ။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ချစ်သူကိုချစ်နေရခြင်းဆိုတဲ့ အတ္တနဲ့ မရှိသင့်တဲ့ မရှိမာနတွေရှိတယ် ။ ဖော့ဖယောင်းအိမ်လေးမှာ ချစ်သူအတွက် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ အမှတ်တရတွေကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းပဲ့ စုဗူးတစ်လုံးရှိတယ် ။ တကယ်တော့ ချစ်သူကို ချစ်ခဲ့ရခြင်းဟာလည်း အိပ်မက်ထဲ ထီပေါက်ရသလိုပါပဲ မိုးလည်းလင်းကော ခြေခြေမြစ်မြစ် ဘာမှမရှိတော့ဘူး။
အရင်က “ မောင်....ရှင် ကျမကို ဒီနေ့ချစ်တယ်မပြောရသေးဘူးနော် ” အဲ့လို ဂျစ်တိုက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးက အခုတော့ “ ကျမ အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ် မောင် ” တဲ့ အချစ်ဆိုတာလည်း အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလည်းတတ်ပါလားဆိုတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာပါပဲ ။ “ ကျနော့်အစာအိမ် ပြန်နာနေလို့ ” အဲ့လိုစကားလေးကြားလိုက်တာနဲ့ စိတ်ပူတဲ့မျက်နှာကလေးနဲ့ ချက်ချင်း ကျနော့်နှဖူးပေါ်သူ့လက်နွေးနွေးလေးရောက်လာတတ်တယ် ပြီးတော့ ချစ်သူ့ရဲ့ စိတ်ပူးတဲ့လေသံလေးနဲ့မေးတဲ့ “ ဆေးသောက်ထားရဲ့လား အရမ်းများနာနေသလားမောင် ဒါမှမဟုတ် နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်လောက်သောက်ထားလိုက်ပါလား ” အဲ့စကားလေးတွေနဲ့တင် ကျနော့်ရောဂါ 100% လောက်ပျောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ခုတော့ ချစ်သူက မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ပြီလေ ချစ်သူပြောတဲ့ ၀တ္တရားကျေ စကားက “ အင်းးး ဆေးသောက်ထားလားတဲ့ ” ။
“ခင်ဗျား အဲ့လို စကပ်တိုတိုလေးတွေဝတ်ထားတော့ ဘိုးတော်ကြီးတွေက ငမ်းငမ်းတတ်ကြည့်ကြတော့မှာပေါ့ဗျ” စကပ်တိုတိုဝတ်တိုင်း စကားများရတဲ့ သူနဲ့ ကျနော့်အတွက် စိတ်ဆိုးရင် ခင်ဗျားလို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းခေါ်တတ်တဲ့ ကျနော့်စကားတွေမှာ ဟိုတုန်းကတော့ချစ်သူက ကျေနပ်စွာနဲ့ “ အင်းပါ မောင် မကြိုက်ရင် နောက်မ၀တ်တော့ဘူး တကယ်ပြောတာ ” ။ ခုတော့ “ဟေး မင်းအဲ့တာကြီးဝတ်သွားမလို့လား ” မေးမိတဲ့ကျနော့်အပြစ် ချစ်သူရဲ့ တန်ပြန်စကားတစ်ခွန်းက ဓားသွားလိုချွှန်မြလျှက် “ တော်စမ်းပါ အရေးမပါတာတွေ အရင်တိုင်းပြောတတ်တုန်းပဲ ” တဲ့ ။ ချစ်သူရယ် မင်းမို့ပြောရက်တယ် ။ “ ခြေထောက်တွေ နာနေတယ်ဆို ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေ မစီးနဲ့ ” ကျနော့်ရဲ့ ဂရုတစိုက်စကားတွေကြားမှာ ချစ်သူက ပြုံးလို့ တစ်ခွန်းတည်း “ ဟုတ်ကဲ့ ” တဲ့ ချစ်သူရဲ့ နှာခေါင်းချွန်ချွန်လေးကို ဆွဲလိမ်ပစ်လိုက်တယ် ။
လေထုတွေကပဲ ပြောင်းလဲသွားသလား အချစ်အလေးချိန်တွေကပဲ ၀ိတ်ကျသွားသလားမသိ ချစ်သူ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးလို့ ကျနော်ဆွေကြည့်လိုက်ရင် “ ဒီဖိနပ် ဘယ်လောက်တန်လဲ သိလို့လား ” ။ “စာတွေ အဲ့လောက်ကျက်နေရတာ ပင်ပန်းမှာပေါ့ နားနားနေနေ နေစမ်းပါလို့ ” ပြောလိုက်မိရင် “ညဏ်ရည်မမှီတိုင်း လာပြောမနေနဲ့ ” တဲ့ ဟုတ်ပါပြီး အဲ့လို သူမရဲ့ ခနဲ့တဲ့တဲ့စကားတွေကြားရင် ကျနော့်ရဲ့ ယောက်ျားမာနတွေအစွယ်တမြှားမြှားနဲ့ မင်းကိုငါ ချစ်နေသေးလို့ပေါ့ကွာလို့ အကျယ်ကြီး အော်ပစ်လိုက်ချင်တယ် ။ ချစ်သူနဲ့ ကျနော့်အတွက် တံတိုင်းတွေခြားသွားခဲ့ပြီး ပြီးတော့ တယောက်နဲ့တယောက် ကျောချင်းကပ်လျှက်ကနေ တလှမ်းချင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်အရပ်ကို ဦးတည်နေကြပြီးဆိုတာ နှစ်ဦးစလုံးသိနေလျှက်နဲ့ ပြန်ဆုံဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာ ....................။
အချစ်ဆိုတာ အဲဒီလိုပဲ.. အချိန်ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်တာ.. :P
June 17, 2010 at 11:22 PM
အချစ်က ဆိုးတာလား၊ ချစ်သူက ဆိုးတာလား ...း)
ရယစ်ကြီးနဲ့ ခြစ်လို့ပါလား ..း))
အင်းးး ဒီလိုပဲ အဲဒီအခြစ်ကြီးက ပြောင်းလဲတတ်လား မသိဘူးနော် ..း))
ကိုမျိုး..သိပ်မခံစားနဲ့ နှလုံးသားကနူးညံ့တယ်..ဒဏ်မခံနိုင်ဘူး..။ =)
တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောနေသလိုပဲ၊ ?
ယောက်ျားတွေမှာ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသား တကယ်ရှိတာလား ဟင်.....
ကိုအောင်ပျူ.....၂ ခုစလုံးဖြစ်နိုင်တယ် တကယ်ပြောတာ ။
မိုးခါးစုတ်...နင်ကတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့ ဟင်းနော် ငါလေ တယ်.....း)
ညီဖြိုး..... ခံစားချက်တူလို့ဖြစ်မယ် ။
sosegado ... အင်း ဒီလိုပါပဲဗျ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးး ။
Crystal လက်တစ်ဖက်ထဲတောင်မှ အတိုအရှည်မတူသေးတာ ယောက်ျားချင်းဆီလည်းတစ်ယောက်ချင်းဆီက ဘယ်တူနိုင်မလဲနော် အဲ့တာဆို မိန်းခလေးတွေကကော အချစ်ဆိုတာကို နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တာလား ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာလားး ??? .
အတိုအရှည်နဲ့ ဆုံးဖြတ်တာပါ.. စိတ်ကိုပြောပါတယ် ;D
June 21, 2010 at 1:23 AM
အဲဒီလို ဧည့်သည်ဆိုးဆိုရင်လဲ မကြိုဆိုပဲ သိချင်ဟန်ဆောင်လိုက်ပေါ့အကြံပေးတာပါ။းp
lu gyi min said...
June 21, 2012 at 2:20 AM
သူငယ်ချင်း ပေးတဲ့ ကဗျာ
စီအက်စ်2ဆိုင်ကလေး
သို့ / အမေ
ညီအစ်ကို (၃) ယောက်
တိုးတိုးလေး တိုက်တဲ့ လေညှင်း
MaeSot Overviews (1)
ကိုသင်္ကြန် + မမိုးချစ်သူ